Slot Game Muay Thai မွေထိုင်းဖိုက်တာ စလော့ - Myanmar Online Game
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ထိုင်းကိုမရောက်ဖူးဘူးဆိုရင်တောင်မှ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးရိုးရာလက်ဝေ့ဖြစ်တဲ့ မွေထိုင်း ကို TV တွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးကြမှာပါ။ လှပတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအလှနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ထိုင်းလက်ဝေ့အငွေ့အသက်တွေက ဒီ Muay Thai Slot Game ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ အရောင်အသွေးတွေစုံလင်ပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရှာကိုမပျက်စီးစေပဲနဲ့ ဖော်ပြထားနိုင်လို့ ဒီ Slot လေးကလူကြိုက်များကြပါတယ်။
ကဲလယ်သာလက်အိတ် ဝတ်ပြီး၊ Coin တွေအများကြီးကိုင်ပြီးတော့ ဒီ Muay Thai Slot Game က Coin တွေဘယ်လောက်များပြန်ကျလာမလဲလို့ ထိုးနှက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား!
ဒီကစားနည်းကတော့ အနိုင်ရရှိဖို့ 243 နည်းလမ်းရှိတဲ့ Slot Game ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Payline ကွက်တိပေါ်ကိုကျစရာမလိုပဲနဲ့ ဘယ်ဘက်ဆုံးမှ ညာဘက်ကို Reel ပေါ်မှာ တူညီတဲ့ Symbol တွေပေါ်ရင်အနိုင်ရပါပြီ!
ဒါကြောင့် Payline အတိုးအလျှော့လုပ်နေစရာမလိုတော့ပဲ Betting အကုန်လုံးက Payline အကုန်လုံးအတွက် ကြုံးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်ကစားသူက Payline ခေါင်းစားစရာမလိုတော့ပဲနဲ့ Betting အတိုးအလျှော့ကိုပဲ ချိန်ညိပေးရင်ရပါပြီ။
ဒီကစားနည်းမှာ Wild Symbol ကတော့ Reel 2,3နဲ့4တို့မှာပဲပေါ်ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ လိုအပ်တဲ့ Symbol တွေအားလုံးအတွက် အစားထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မွေထိုင်းလက်ဝေ့သမားကြီး Symbol နဲ့ Bonus ကတော့ ဘယ်မှညာဘက် ဘေးချင်းကပ် အနည်းဆုံ3းခုနဲ့အထက်ကျပြီဆိုရင် Free Game ကို Trigger လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ!
ဒီ မွေထိုင်း Slot မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Coin ပမာဏကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Wild Symbol ကအနိုင်ရနှုန်းမြှင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အလယ် Reel ၃ခုမှာပဲပေါ်တော့ရဖို့ အရမ်းလဲမလွယ်ကူလှဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် Reel တစ်ခုထဲမှာပဲ ထပ်ဆင့်ပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်လို့ ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ အနိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးက မြင့်တက်သွားပါပြီ!
Muay Thai Fighter အနည်းဆုံ3းယောက်နဲ့အထက် ဘယ်ဘက်ဆုံးကစပြီးဘေးချင်းကပ် ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Free Game Bonus Trigger ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်လှည့်ချင်တဲ့ Free Spin အရေအတွက်ကို ရွေးချယ်လို့ရသွားပါပြီ။
Free Spin နည်းလေ ပါတဲ့ Symbol ရဲ့လျော်ကြေးတန်ဖိုးကများလေပါပဲ။Free Spin တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ရင် အဲ့ Spin အရေအတွက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Symbol တွေပဲကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ တခြား Special Symbol တွေပါဝင်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာ Bonus Symbol ကပြန်ပါလာနိုင်ပါသေးတယ်။ Bonus ထပ်ပြီး Trigger ဖြစ်သွားရင်တော့ လောင်းကြေးက ပထမ Free Game မစခင်ကလောင်းကြေးအတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ 10 အကြိမ်အထိအများဆုံး Retrigger လုပ်လို့ရပါတယ်။
Symbol တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလဲ ပုံနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
အဓိကအားဖြင့်တော့ ဆင်ဖြူတော် Symbol တွေနဲ့ ဆုကြေးတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်! Asia နိုင်ငံအတော်အများလိုပဲ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာမှာလဲ ဆင်ဖြူတော်က Spiritual အရအရမ်းကိုမြင့်မြတ်တဲ့ သတ္တဝါအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်လို့ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Payout အမှတ်ကလဲ အများဆုံးပါ။
3 ခုတွဲကျရင် Coins 100 ၊4ခုတွဲကျရင် Coins 150 ၊5ခုတွဲကျရင် Coins 750 အထိရနိုင်ပါတယ်! အဲ့တာကြောင့် Symbol တွေကို မျက်လုံးလျှင်လျှင်နဲ့ ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဆင်ဖြူတော်ကိုအလွတ်မပေးနဲ့နော်။
ကဲ.. ဒါဆိုရင် Thai ရိုးရာအငွေ့အသက်တွေနဲ့ ပြည့်နှုက်နေတဲ့ Muay Thai Slot Game မှာ လက်သီးတစ်ချက်နဲ့ Coin တွေအများကြီးကျလာစေဖို့ အတွက် Ready ဖြစ်ပြီလား?
အခုပဲ JDBYG ကိုလှမ်းခဲ့လိုက်တော့နော်!